Na efa any am-ponja aza ny Kohen Rivolala : mpianatra 20 indray no nihetsika ambalavelona | NewsMada
Na efa any am-ponja aza ny Kohen Rivolala : mpianatra 20 indray no nihetsika ambalavelona
Mitaintaina, tsy mandry saina ireo ray aman-drenin’ny mpianatra any Miandrivazo. Na efa voatana any am-ponja, hatry ny andro vitsivitsy aza izay ny Kohen Rivolala, mbola mirongatra ihany ny ambalavelona mahazo ireo mpianatra. Tanora 20 indray no niharan’izany, omaly.
Mpianatra ao amin’ny sekolin’ny masera ao Miandrivazo ireto nihetsika ambalavelona ireto omaly. Vokany, nandray fepetra avy hatrany nampiato ny fampianarana ny tompon’andraikitra ao amin’ity sekoly tsy miankina ity. Voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa mitovy avokoa ny fomba fisehon’ny aretin’ireo ankizy niharam-boina ireo. Mihinjitrinjitra sady torana ireo tanora rehefa mihetsika ny aretina. Toy ireny olona tsy mahatsiaro tena ireny mihitsy ny sasany amin’izy ireo, araka ny fanazavana hatrany. Misy amin’ireo tanora no voalaza fa manonona ny anaran’ny Kohen Rivolala.
Nihetsika avy hatrany toy izao koa ny aretin’ireo ankizy efatra saika hohenoin’ny fitsarana momba ilay raharaha nitazonana an’ity lehiben’ny tik, tak do ity. Vao nahita an’ny Kohen tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ireo tanora, nihetsika tsy nisy toy izany ny aretina. Voatery naato nandritra ora maromaro ny fitsarana fa lasa nifarobaka namelona ireo ankizy ny tao amin’ny fitsarana.
Niroso tamin’ny vavaka sy ny fanalana devoly kosa ireo tompon’andraikitra ao amin’ilay sekolin’ny masera vao nijanona ny aretin’ireo tanora ireo.
Miahiahy an’ny Kohen hatrany ny ray aman-drenin’ireo ankizy…
Miantefa any amin’ny Kohen hatrany ny ahiahin’ny ray aman-drenin’ireo tanora mihetsika ambalavelona ao an-toerana. Mihevitra izy ireo fa na efa voaheloka any am-ponja aza izy, mbola manana hery hatrany hahavita hanetsika ambalavelona amin’ireo ankizy ao Miandrivazo. Izany rahateo no nahatonga ny tompon’andraikitra ao amin’ny fonja hanapaka ny volony fa ao no misy ny heriny.
Mihorohoro tanteraka, araka izany, ny mponina ao an-toerana manoloana ity raharaha ambalavelona sy Kohen Rivolala ity. Misy ireo olona sasany efa nikasa ary nangataka ny hanaovana fitsaram-bahoaka azy mialoha ny nisamboran’ny mpitandro filaminana azy.
Nanazava kosa ny mpampianatra amina sekoly iray ao Miandrivazo izay mahalala tsara ny fombafomban’ireo tanora ao an-toerana fa vokatry ny tsy fifanarahana eo amin’ny tovolahy sy tovovavy (mpifankatia) any amin’iny faritra Morondava iny hatrany Miandrivazo no nahatonga ny sasany amin’ireo tovolahy hanao fanafody amin’ny alalan’ny fampihetsehana ambalavelona rehefa tsy manaiky an-dry zalahy ilay tovovavy miaraka aminy. Nanamafy hatrany ity mpampianatra ity fa tsy midika ho fiadaniana amin’ny Kohen Rivolala izany fa efa hatramin’izay no nisy ambalavelona tao Miandrivazo fa tsy vao tamin’ity raharaha nahatonga ny fampidirana am-ponja an’ny Kohen ity, saingy izy no tratra farany amin’izao ka mahatonga ireo mponina ao an-toerana hamatra aminy ho tompon’antoka amin’ny fanaovana izany.
Maro rahateo ireo faritra ahitana olona mahay milalao itony karazana ambalavelona itony ary fahafinaretan’izy ireo ny mahita ireo tanora mijalijaly rehefa mihetsika ny aretina. Olana ara-pitiavana avokoa matetika no fototry ny olana ka miafara amin’ny fanaovana ankasomparana rehefa misy ny tsy fifanarahana eo amin’ireo mpifankatia. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity raharaha ity.
Une réponse à "Na efa any am-ponja aza ny Kohen Rivolala : mpianatra 20 indray no nihetsika ambalavelona"
Norah 23/01/2016 à 09:12
Mba mianara teny gasy mazava ry mpanao Gazety. Anaran’olona tsy azo atao “ny” izany. I Kohen Rivololala no fiteny fa tsy “Ny Kohen Rivolala”. Mankarary maso mamaky an’ilay “ny” eo alohan’anaran’olona.